दवन्द कालमा हजारौंले ज्यान गुमाएको रोल्पामा कोरोना सङ्क्रमित भने शून्य – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना । १७ भाद्र २०७७, बुधबार १५:३२
# उमा के.सी . / रासस #
१७ भदौ, रोल्पा/ केही बर्ष अगाढी माओबादी जनयुद्धले क्षतबिक्षत बनाएको मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला रोल्पामा भने बिश्व विश्वव्यापीरुपमा प्रभाव पारेको कोरोना सङ्क्रमित शून्यमा झरेको छ ।
देशैभर कोरोना सङ्क्रमित समुदायस्तरमै बढिरहेको समयमा रोल्पामा भने कोरोनाको प्रभाव हाल शून्य भएको अवस्था भन्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिनुभएको छ ।
कोरोना सक्रिय सङ्क्रमितका लागि रोल्पा जिल्लामा ७८ शैया आइसोलेशन केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
रोल्पाको जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा आइसोलेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमा हाल कोरोना सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ ।
पछिल्लो पटक अस्थायी आइसोलेशन केन्द्रमा बस्दैआएका ३ जना पनी घर फिर्ता भएसँगै जिल्लामा कोरोना सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या शून्यमा झरेको हो ।
जिल्लामा हालसम्म देखापरेका सङ्क्रमित ८३ मध्ये ७८ जनाले कोरोना जितेर आइसोलेशनबाट फिर्ता भईसक्नु भएको छ । सङ्क्रमितहरु मध्येका अन्य ५ सङ्क्रमित भने बाहिरी जिल्लाका रहेकाले हाल सम्पर्कमै नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रोल्पाका प्रमुख अनिल केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
क्वारेन्टिनमा बसेका बखत आत्महत्या गरेका एक जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएका कारण रोल्पा जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ देखिएको छ ।
रोल्पा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साथै सर्वसाधारणले समेत कोरोना नियन्त्रणका लागि आर्थिक-सामाजिक, भौतिक सहयोग गदै आईरहेेेको प्रजिअ रानाले जानकारी दिनुभएको छ !
जिल्ला कोराना शून्य रहे पनि सरकारको निर्देशन नहुँदासम्म आइसोलेशन केन्द्र कायमै रहने स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ ।
भारत तथा अन्य मुलुकका साथै देशको विभिन्न जिल्लाबाटसमेत रोल्पा आवत-जावत भइरहेको हुँदा जुनसुकै बेला कोरोना सङ्क्रमित देखिन सक्छन् । गत जेठ १ गतेदेखि हालसम्म भारतबाट २ हजार ३७९ र तेस्रो मुलुकबाट २६१ जना रोल्पा भित्रिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यसरी भित्रने मध्ये सबै भन्दा धेरै सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा ७४७ जना भारतबाट र ५ जना तेस्रो मुलुकबाट छन् भने सबभन्दा कम थवाड गाउँपालिकामा भारतबाट २० र तेस्रो मुलुकबाट २४ जना छन् ।
जिल्लामा हालसम्म दुई हजार ४८१ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकामा २ हजार ४०८ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । हाल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ९७ शैयाको २२ स्थानमा क्वारेन्टिन छन् ।
फेरी कोरोनाको जोखिम बढेकाले नेपालगञ्जमा “मास्क लगाउ” अभियान सञ्चालन